Umonakalo webango: yintoni ekufuneka uyazi? | Law & More BV
Blog » Ukonakala kwebango: Yintoni ekufuneka uyazi?
Ngaba kukho ukusilela kwaye ngaba akunakuphunyezwa? Kwimeko apho, umonakalo obangelwayo awunakubangwa ngokuthe ngqo kwelinye iqela. Ngokwesiqhelo, isaziso sokungagqibeki kufuneka sithunyelwe kuqala ukunika elinye iqela ithuba lokufezekisa uxanduva lwalo okwangoku nangexesha elifanelekileyo. Ukuba elinye iqela lisilele ukufezekisa uxanduva lwalo, oku kuya kukhokelela ekusileleni kwaye nembuyekezo inokubangwa.
Iindidi zomonakalo ezifanele ukufumana imbuyekezo
Ukuba iimfuno zesivumelwano esisivumelwano okanye sobutyala siyazifezekisa, imbuyekezo ibango. Umonakalo ofanelekileyo kwimbuyekezo eNetherlands uya kubandakanya ilahleko yemali kwaye enye ilahleko. Apho ilahleko yemali ngokungqinelana neNqaku 6:96 yeKhowudi yoLuntu yaseDatshi ichaphazela ilahleko okanye ilahleko yenzuzo ethe yafunyanwa, ezinye iinkxalabo zelahleko ngokwenqaku 6: 101 leKhowudi yaseDatshi yokubandezeleka okungaphathekiyo. Ngokomgaqo, ukonakaliswa kwepropathi kuhlala kufanelekile kwaye kufanelekile kwimbuyekezo, okunye okungalunganga kuphela ngokomthetho ubonelela ngamagama amaninzi.
Lo mgaqo uthetha ukuba umntu owenzakeleyo wesigulo esidala ukonakaliswa akasayi kubuyiselwa ngaphezulu komonakalo wakhe opheleleyo. Inqaku lesi-6: i-100 yeKhowudi yeDatshi yaseburhulumenteni ithi ukuba isigameko esinye asibangeli ukuba ixhoba libekho, kodwa sivelisa ezinye inzuzo, esi sibonelelo kufuneka sihlawulwe xa kumiselwa umonakalo oza kuhlawulwa, ngokokuba kufanelekile oku. Isibonelelo singachazwa njengophuculo (lwe-asethi) kwindawo yexhoba ngenxa yomsitho obangela umonakalo.
Ngaphezu koko, umonakalo awuyi kuhlala uhlawulwa ngokupheleleyo. Ukuziphatha okungafunekiyo kwexhoba okanye iimeko kwindawo yomngcipheko wexhoba kudlala indima ebalulekileyo koku. Umbuzo ekufuneka ubuzwe emva koko ngulo ulandelayo: ngaba ixhoba belinokuthi lenze ngendlela eyahlukileyo kunaleyo yenze malunga nokwenzeka okanye ubungakanani bomonakalo? Ngamanye amaxesha, ixhoba linokunyanzeleka ukuba liwunciphise umonakalo. Oku kubandakanya imeko yokuba nesicima mlilo phambi kokuba kwenzeke isiganeko somonakalo, njengomlilo. Ngaba kukho nasiphi na isiphoso kwicala lexhoba? Kwityala, indlela oziphethe ngayo Isiseko esikhokelela ekunciphiseni ukunyanzelwa kwembuyekezo yomntu obangela umonakalo kunye nomonakalo kufuneka wohlulwe phakathi komntu obangela umonakalo kunye nexhoba. Ngamanye amagama: indawo enkulu yomonakalo ihlala kwinkcitho yexhoba. Ngaphandle kokuba ixhoba lihlawulelwe i-inshurensi.
Post edlulileyo Iimeko kwimeko yokudibana kosapho
Post Next Ukugxothwa